Tempered Glass Vagadziri uye Suppliers - Wholesale Tempered Glass Suppliers
Yakapisa Chest Freezer Flat Glass
YB Tempered Chest Freezer Flat Glass iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara Low-E girazi rakadzikama, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃.
Ice Cream Ratidza Girazi
YB Ice Cream Ratidza Girazi iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara Low-E girazi rakadzikama, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃.
Cake Cabinet Ratidza Girazi
YB Cake Cabinet Ratidza Girazi iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa re6mm rinoyangarara Low-E, rinodzivirira kudhumhana, risingaputike nekuoma kwegirazi remhepo remotokari. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃.